I-10 I-Sultry Sokey Amehlo e-Makeup Ajonga Sawela Uthando Na
SUkwenza mokey kwamehlo yinto enye yobuhle ebeyikhona kudala kwaye ikho ngoku inomzuzwana omkhulu kwihlabathi jikelele. Ngokuqinisekileyo, ayisijongi esinokushukuma mihla le kodwa asinakuphika ukuba ngamatheko akhethekileyo kunye neziganeko zangokuhlwa, inokwazi ukuthatha imbonakalo yakho ukusuka "oh kuhle" uye ku "oh wow!"
Esinye sezizathu zokuba umsi wokujonga umsi uqhubeke uthandeke ixesha elide kukusebenza kwezinto ezahlukeneyo. Amehlo atshayayo awangeni kuphela utyikityo mnyama kodwa anokwenziwa phantse kuyo yonke imibala phaya. Mpunga, luhlaza, burgundy- uyayibiza ngegama, unako Ukutshaya yona. Unokutshiza izinto ngomxube wemibala. Ubunzulu beliso lakho elinomsi ikwangumbandela wokukhetha njengoko uza kubona kolu luhlu. umsi onomsi
Ngelixa ukutshaya amehlo yenye yezona zidume kakhulu iinto zokuzilungisa ukujonga, kunokuba yinkohliso kakhulu ukuyiphumeza xa ungazazi iindlela ezifanelekileyo zokusebenzisa. Ubuqili bokuqokelela ukujonga umsi ofanelekileyo kukukhetha umbala ofanelekileyo wethoni yakho yesikhumba; Ukukhetha isithunzi esikhanyayo sokutshintsha kwaye okona kubaluleke kakhulu, kukudibanisa! Ukudityaniswa okuhle ngundoqo apha. Indlela odibanisa kakuhle ngayo iitoni zeliso lakho kwiliso lakho liso limisela ukuba inkangeleko yomsi wakho ayiphelelanga shushu or Hmm.
Kukhuthazo lwakho, sihlelise i-10 sultry enomsi wamehlo ojongiweyo sijongile sibona kwigram. Songeze isifundo esihle nge UDimma Umeh ukukunceda ubugcisa.
Nazi i-10 zokuqwayiza ngamehlo esityhoboze…
UVanessa 'Vandora' Williams nge @ bare2be bec
UDhiri Egbuson-Akande nge @swishsignature
USiphoe Turner nge @hungvanngo
Bukela: isifundo seso somsis jonga…
Ifoto yetyala: IG / NjengokuThunyelwe isifundo ngamehlo omsi
Ukuhlaziywa. Yapapashwa kuqala nge-15 ka-Epreli ngo-2019.
Bare ebuhleni Bare2be bec I-Bibyonce UDhiri Egbuson-Akande Isitayile esinenwele Iamdodos Iamenado Joy Adenuga Joyce Jacob Kate Henshaw Pat McGrath Shay Mitchell ngumsi Amehlo antshovu umsi wokujonga ngamehlo umsi wamehlo omehlo Sophie Turner Vandora UVanessa Williams
Ulonwabo Udo Ngamana 28, 2020